ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: မွေးနေ့ထပ်တူ Blogger နှစ်ဦးသို့… မွေးနေ့မှသည် သက်ဆုံးတိုင် ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုရန်အောင်နဲ့ ညီမလေး ဘာညာ ရေ
မွေးနေ့ထပ်တူ Blogger နှစ်ဦးသို့… မွေးနေ့မှသည် သက်ဆုံးတိုင် ပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုရန်အောင်နဲ့ ညီမလေး ဘာညာ ရေ
ဘလော့ဂါကြီး ကိုရန်အောင်အတွက် Happy Birthday ပါနော်.. ဟဲဗီးကျကျ Monde Mariah Carey ရဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် သီချင်းနဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်နော်..
သီချင်း တအားကြိုက်တဲ့ ညီမလေး ဘာညာ အတွက် Happy Birthday Barr Nyarr ရေ …. ဖန်စီကျကျ Stevie Wonder ရဲ့ Happy Birthday သီချင်းလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်နော်..
မာရီယာကလည်း ခပ်ဟော့ဟော့. ကျွန်တော်ကလည်း ခပ်သော့သော့ဖြစ်နေပြီ. (အဟဲ. ရေသောက်ထားလို့ပါ)
ရင်ထဲမှာ ပြောမပြတတ်အောင် ကြည်နူးမိပါတယ်ခင်ဗျာ.
မွေးနေ့တူတဲ့ ဘာညာလေးကိုလည်း ဒီနေရာကနေ တစ်ပါတည်း မွေးနေ့ဆုတောင်းလေး ပို့သလိုက်ပါတယ်.
ရေးး.. အခုတော့ရဘီ.. ကိုးနက်ရှင်ကောင်းသွားတာ။ ကျေးဇူး မွမွ အမရေ..။ ဂျီတော့မှာ ပြောထားသလိုပဲ။ သီချင်းကကောင်းတော့ သီချင်းနဲ့ဒွန့်နေရတယ်။ :P